Queen အဖွဲ့ရဲ့ Lead Guiter တီးသူ Brian May မှ Bohemian Rhapsody ဇာတ်ကားထဲမှ Rami Malek ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Oscar ဆု နဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ဆို။ – SoShwe
Home/Entertainment/Queen အဖွဲ့ရဲ့ Lead Guiter တီးသူ Brian May မှ Bohemian Rhapsody ဇာတ်ကားထဲမှ Rami Malek ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Oscar ဆု နဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ဆို။
Queen အဖွဲ့ရဲ့ Lead Guiter တီးသူ Brian May မှ Bohemian Rhapsody ဇာတ်ကားထဲမှ Rami Malek ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Oscar ဆု နဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ဆို။
“ We are the champions, my friends….
And we’ll keep on fighting till the end….
We are the champions, we are the champions….
cause we are the champions of the world! ”
ဒီဟာကတော့ သူ့ရဲ့ ဂီတသက်တမ်းတစ်လျှောက် အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဂီတသမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးအဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Queen အဖွဲ့ရဲ့ Lead Vocalist ဖြစ်သူ Freddie Mercury ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်တယ်။
Bohemian Rhapsody မှာ Freddie အဖြစ် အရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Rami Malek ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ကို Brian May မှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင် Freddie သာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိဦးမယ်ဆိုရင် သူလည်း ချီးကျူးမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ Bohemian Rhapsody ကို အင်္ဂလန်မှာ အောက်တိုဘာ (1209၂၄)ရက်က စတင်ကာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ပထမအပတ်မှာတင် ဝင်ငွေ ၆.၄၈ မီလီယမ်ပေါင် ရရှိကာ Bradley Cooper နဲ့ Lady Gaga တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ A Star is Born ” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
Previous Hailey Baldwin မှ “ Bieber ” စာသားပါ စိန်လည်ဆွဲကို Justin Bieber ဆီကနေ မွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့။
Next ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကာတာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် (1209၄၀) ထက် ပိုမရသော ဝင်ငွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးနေရသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ။